New Skiin All In One Tone Up Cream ရဲ့ ၃ လ Target Trip က August လ နောကျဆုံးဆိုတာ မမနေဲ့နျော ✈️ 2020 June လ မှ August လအတှငျး New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပျ ၁၀၀၀၀ ရောငျးခသြူတိုငျး ထိုငျးနိုငျငံ ပတ်တရားကမျးခွေ ခရီးစဉျ သှားရောကျခှငျ့လကျမှတျ တဈစောငျရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ Target လေးပွညျ့အောငျ ကွိုးစားကွမယျနျော 🤩
New Skiin Tone Up Cream ကို ညဖကျမလိမျးရဘူးလို့ ပွောနသေူတှေ သိဖို့ . . . New Skiin Tone Up Cream ကို Korea နိုငျငံ reBom စကျရုံက Formula ထုတျပွီး ထုတျလုပျထား‌ပေးတာပါ. Formula ထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံရဲ့ Instruction အရ နရေ့ော ညပါ လိမျးဖို့အတှကျ ထုတျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ. KFDA ကလညျး နရေ့ောညပါ လိမျးဖို့အတှကျ ခှငျ့ပွုပေးထားပါတယျ. မွနျမာနိုငျငံ FDA ကလညျး နရေ့ော ညပါ လိမျးဖို့အတှကျ စဈဆေး ခှငျ့ပွုပွီးဖွဈပါတယျ. ဒီတော့ New Skiin Tone Up Cream ကို Formula ထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံထကျ ပိုပွီးနားလညျသိရှိနလေို့ပဲလား. KFDA နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ FDA စဈဆေးခကျြတှကေိုပဲ အသိအမှတျမပွုခငျြလို့ပဲလား မသိ ညဖကျလိမျးရနျမဟုတျဟု တဈဖကျပိတျပွောနသေူတှကေို သတိပေးလိုကျပါတယျ. New Skiin Tone Up Cream ကို အသေးစိတျ နားလညျခွငျးမရှိပဲ ‌‌လြောကျပွောနသေူမြားကို တရားဥပဒအေရ အရေးယူသှားမှာ ဖွဈကွောငျး အသိပေးအပျပါတယျ.
Ma Kay Thwe Aung
Focusက Agent လက်ခံခြင်း ပိတ်ရန် 6ရက်အလို ဘယ်သူတွေ agentဝင်ပြီး ရွှေဆုယူကြမလဲ #crd
Ma Su Su Hlaing
Ma Khine Mar Myint
New Skiin Cream ရှိပွီးကတညျးက အသားမဖွူမှာ မ‌‌ကွောကျတော့ဘူး. Whitening ဖွဈ‌လို့ ၀ကျခွံထှကျတတျတဲ့အသားအရနေဲ့ တညျ့ပါ့မလား စိတျပူစရာ မလို‌တော့ဘူး‌နျော ဘေးကငျးစှာနဲ့ အသားဖွူလာဖို့အတှကျဆိုရငျတော့ New Skiin Cream ကိုသာ ‌ရှေးခွယျလိုကျပါ. New Skiin5g တဈထုပျ ၃၅၀၀ ကပျြ.
New Skin လေးဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်😍😘 ဘာမှမကြည့်နဲ့ကိုယ်ရဲ့မျက်နှာလေးပဲကြည့် ဘာလိမ်းလိမ်းအဆင်မပြေတဲ့မျက်နှာလေး သူနဲ့တွေ့မှ အဆင်ပြေတော့တယ် ကိုယ်ဆိုသူ့ကိုလူတာ ၅ရက်​လောက်​လိမ်းတာနဲ့ တော်တော်လေးကိုသိသာတယ် ကိုယ်မကောင်းရင်မညွှန်းဘူး ကောင်းလွန်းလို့ညွှန်းတာ☺ new skin ကို မနက်ဘက်လဲလိမ်းတယ် 💁 ညဘက်မျက်နာသစ်ပီးလဲလိမ်းတယ် မနက်လင်းရင်💁 မျက်နှာလေးကိုအိပီးဝင်းနေရော ကိုယ်အရမ်းကြိုက်နေရော 😍😍 ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကလေ အရမ်းကိုဆိုးတဲ့ထဲပါတယ်သိလား အဆီပြန်တယ် ဝက်ခြံ ဆားဝက်ခြံ အသားမညီ ဖြစ်တယ် skin care လဲသေချာမသုံးဘူး အာ့ အမ က အဲ့လိုမလုပ်နဲ့သေချာ care လုပ် ဘယ်လောက်ဈေးကြီး ပစ္စည်းတေပဲ သုံး သေချာcare မလုပ်ရင်မရဘူးဆိုတာနဲ သေသေချာချာလေး လုပ်တော့ မျက်နှာလေးချောလာတယ် 😍😍😘😘အရင်လိုကြမ်းမနေတော့ဘူး အရမ်းကြိုက်နေပီ 😍😍 အာ့ကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ မမ ညီမလေး တေလဲ သုံးကြည့်ပါ ဘူးအရင်မသုံးခင် အများကြီးပါတယ်​အထုပ်လေး​နော်​ ကျန်သေးတယ်အထုပ်လေးဆိုပေမယ့်အရင်​သုံးကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်တယ်သုံးကြည့် ဈေးလဲဒီလောက်မကြီးပါဘူး အထုပ် မှ ၃၅၀၀ ပါ 😊 အရင်ဆုံး ၃၅၀၀ရင်းကြည့်လိုက် လှလာလိမ့်မယ် အသားလေးလဲပြောင်လာတယ် glow လာတာပေါ့နော် ဒီမနက်ဆို ကိုယ် ဘာမှမလိမ်းဘူး ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေလေးပြချင်လို့ toner လဲမလိမ်းဘူး essences. လဲမလိမ်းဘူး New Skin တမျိုးထဲပဲလူးပြီး အပေါ်က သနပ်ခါး လူးလာတာ တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတယ် 😍😍😍😍 တကယ်ပြောတာပါ စမ်းသုံးကြည့်ကြပါ ကောင်းလွန်းလို့ ညွှန်းတာပါနော် 😊 တစ်​ချို့ဆို စသုံးတာကိုဘူးစသုံးတာ​နော်​ Snail Wish 🐌🐌ကိုအဲ့လိုယုံတာ😍 အထုတ်​-၃၅၀၀ ဘူး -၂၉၅၀၀(ဘူးကအထုတ်​ရဲ့၁၀ဆ​နော်​)😍 ✆﻿ -09798790828 လိုချင်ရင်💁 cbမှာ လာပြောပါနော်😍
First Page «34 » Last Page